नेपाल र मलेसियाबीच मैत्रीपूर्ण खेल भोली – कसले मार्ला बाजी ? | Hamro Khelkud
नेपाल र मलेसियाबीच मैत्रीपूर्ण खेल भोली – कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– झन्डै ६ महिनामा नेपाल र मलेसियाको महिला राष्ट्रिय टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेलमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यति बेला अपरिचित लाग्ने मलेसियालाई १–० ले हराएको नेपालका लागि यसपटक भने केही सहज देखिन्छ ।
एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा त्यतिबेलाको खेल १–० ले जितेको नेपाल अहिले दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि मलेसिसया पुगेको छ । एकपटक खेलिसकेको टोलीसँग पक्कै पनि नेपाली टोलीको मनोबल पक्कै उच्च रहनुपर्छ । यी दुई टोलीबीच सोमबार र बुधबार खेल हुनेछ ।
मलेसियाकै खेलबाट राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकका रुपमा ‘डेब्यू’ गरेका कुमार थापा अहिले पनि टोलीमा छन् । अधिकांश उही खेलाडी र प्रशिक्षकसहित मलेसिया पुगेको नेपालका लागि यसपटक मैदानमात्र फरक हुनेछ । प्रशिक्षक थापा भन्छन् ‘हामी दुवै खेल जित्नेमा विश्वस्त छौं ।’
मलेसियासँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि थापाकै नेतृत्वमा नेपालले साफ महिला च्याम्प्यिनसिप खेलेको थियो । यद्दपी त्यो च्याम्पियनसिप नेपालका लागि केही व्यक्तिगत सफलता बाहेक सम्झनलायक रहेन ।
तीन पटकको उपविजेता रहेको नेपाल यसपटक सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो । तथापी नेपालले दाबेदारको छवि भने बनाएकै थियो । अहिले टोलीमा एक खेलाडीको मात्र परिवर्तन छ । दीपा अधिकारीको ठाँउमा सजना रानाले मौका पाएकी छिन् ।
सजनाको आगमनले टोलीमा थप उर्जा भरिएको प्रशिक्षक थापाको ठम्माई छ । नेपाल र मलेसियाबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राती ६ बजे सुरु हुनेछ ।